Ungasithatha kanjani isithombe-skrini ku-Android Wear | Izindaba zamagajethi
Ukuthatha izithombe-skrini ze-Android Wear yethu
Ngesikhathi kwenziwa i-Google IO, kwethulwa izindaba eziningi ezinhle kakhulu zivuna umphakathi wonke ukuthi ngandlela thile inedivayisi ephathekayo ye-Android ezandleni zabo; omunye wabo wakhuluma nge i-smartwatch sakho nge-Android Wear, efanayo egcina izici ezithokozisayo uma seyivumelanisiwe nenye yezingcingo zethu eziphathwayo.
Mayelana nezici zale Google Android Wear SmartWatch, sekushiwo okuningi ezinhlotsheni ezahlukene zamabhulogi enetheni, okuthile okuze kusimangaze futhi kusimangaze ngasikhathi sinye, ngoba ngeke sidinge ukukhipha ifoni ephathekayo ukuhlola imilayezo noma ukushaya izingcingo (phakathi kweminye imisebenzi eminingi). Manje, uma kwidivayisi yeselula ye-Android (ithebhulethi noma ifoni ephathekayo) ungathatha izithombe-skrini kalula, Ngabe kungenziwa ukubanjwa kulawa mawashi ahlakaniphile nge-Android Wear? Uma ulandela ukufundwa, sizokutshela ukuthi ungawenza kanjani lo msebenzi kokusele kwalesi sihloko.
Thatha izithombe-skrini ku-Android Wear?
Noma ngubani angacabanga ukuthi uma sinomakhalekhukhwini ezandleni zethu, kuphela indaba yokucindezela izinkinobho ezimbalwa ukuthatha isithombe-skrini; Yize kuliqiniso ukuthi lo msebenzi ungenziwa ngendlela elula futhi elula kuthebhulethi noma kumaselula we-Android (futhi kusobala, kwi-iPad noma i-iPhone enezinhlobonhlobo zazo), isimo esifanayo besingenakwenzeka okwenziwe kulawa mawashi ahlakaniphile nge-Android Wear ngokwendabuko, noma ngabe sisebenzisa amaqhinga ambalwa, singenza noma yiluphi uhlobo lwezithombe-skrini zalokho esikubukezayo ngesikhathi esithile kulezi zisetshenziswa.
Njengoba siphakamisile esigabeni esedlule, natively cishe akunakwenzeka thatha isithombe-skrini ku-Android Wear, ngakho-ke uzama ukusisekela kuzinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezisatshalaliswe konjiniyela besikhulumi, nokuthi njengamanje sizozisebenzisa ngamasu ambalwa okufanele siwalandele.
Okokuqala, kufanele iya kusixhumanisi esilandelayo, ezokuqondisa kuwebhusayithi yabathuthukisi be-Android; lapho kuzofanele landa i-SDK ukuyifaka kukhompyutha yakho ye-Windows, noma ngabe uzosebenza kwi-Mac kufanele ubheke inguqulo efanele yesigaba esiboniswe phambili kancane.
Lapho sesilande futhi safaka i-Android SDK kwikhompyutha yethu ye-Windows (noma eyodwa nge-Mac), sizobe sesikulungele ukuzama ukufeza inhloso yethu; ngaphambilini, kufanele ufake izilungiselelo zakho ze-Android Wear ukuze ube nokuthiniyenza kusebenze Imodi Yonjiniyela ku-Watch Yakho.
Isithombe esisibeka engxenyeni engenhla yisampula elincane lokuthi uzokwenzani ukuze ukwenze sebenzisa le modi kuwashi lakho le-Android Wear; Kukhona iqhinga elincane okufanele ulwenze phakathi nale nqubo, into esizokuchazela yona ngezinyathelo ezimbalwa ezingezansi:
Okokuqala, faka izilungiselelo zewashi lakho le-Android Wear.
Ukhetha inketho «Mayelana".
Izinketho ezimbalwa zizovela ngokushesha.
Kufanele "ushaye" (thinta) cishe izikhathi eziyi-7 zilandelana kwinombolo yenguqulo kuze kuvele iwindi elilandelayo.
Lapho kufanele Yenza kusebenze imodi yokulungisa iphutha ye-ADB.
Uma ukwazile ukwenza le modi isebenze, uzoba nethuba lokuqala thatha izithombe-skrini zewashi lakho le-Android Wear kepha kusuka kukhompyutha yeWindows. Ukuze wenze lokhu, kufanele uyixhume ngekhebula le-USB bese ufaka imiyalo embalwa ye-ADB kusuka lapha, ngaphandle kwesiphakamiso esincane okulandelayo:
i-adb shell screencap -p /sdcard/screenshot.png
Ukuthwebula kuzogcinwa ewashini lakho, ongalithumela kamuva kukhompyutha ngomyalo olandelayo:
ukudonsa i-adb /sdcard/screenshot.png
Yize kubonakala kuyindlela eyinkimbinkimbi kakhulu ukulandela, kepha konke kuyindaba yesikhashana nokubekezela; ngaphandle kokungabaza lokho lolu hlobo lwamathiphu namasu luzosiza kakhulu labo abazinikele ekwenzeni okokufundisa kuma-blog abo, lokhu ukusekela isithombe sithwebula njengoba siphakamisile ukusebenzisa lezi zindlela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ukuthatha izithombe-skrini ze-Android Wear yethu
Khombisa futhi ufihle izinhlelo zokuqalisa ku-Ubuntu 14.10 ngobuqili obuncane
Ungakusindisa kanjani ukusesha kwethu okubaluleke kakhulu ku-Windows 8